के अध्ययनको महत्व घटेकै हो ? - Janakpur Today
के अध्ययनको महत्व घटेकै हो ?
पूर्वमा कोसी, पश्चिममा नारायणी, उत्तरमा चुरे तथा दक्षिणमा गंगा नदी । चारैतिरको यस सिमानाको बीचमा रहेको यस भूमिलाई अतिप्राचीन कालमा तीरभूक्ति भनिन्थ्यो ।मानव सभ्यताको विकासक्रममा यस क्षेत्रमा विश्व प्रसिद्ध विद्वानहरुले जन्म लिएको र यस भूमिको नाम विश्वभर फैलाएको देखिन्छ ।विद्वान र विदुषीले भरिपूर्ण देखिएको यो भूमिको विगत कति अध्ययनशील तथा अनुसन्धान र तर्कले भरिएको थियो भन्ने कुरोको अध्ययन गर्ने हो भने यस क्षेत्रका मानिसको हृदय गर्वले पुलकित हुन्छ । मस्तिष्कमा आफ्नो पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक गरिमाको झल्को आउन थाल्छ र पितापुर्खाले यस क्षेत्रको प्रतिष्ठा बढाउन खेलेको भूमिकाप्रति शिर निहुरिन्छ । आफ्नो इतिहास र विगतको प्रतिष्ठाप्रति गर्व नगर्ने को होला ?
कोसीदेखि नारायणी क्षेत्रमध्ये अलिकति पश्चिमको सिमाना यस प्रदेशमा रहेको छैन । यसै गरी दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य रहेको छ।गगादेखि चुरेसम्मको उत्तर–दक्षिण भागको पनि महत्वपूर्ण भाग भारतमा रहेको छ अहिले । बाँकीको आठ जिल्लाको एउटा प्रदेश बनेको छ नेपालमा । यस प्रदेशको मात्र विगतलाई हेर्ने हो भने पनि यसको इतिहास अनेक गरिमाले भरिपूर्ण छ । इतिहासका एकसेएक गाथाहरुले गर्दा समाजको शिर उँचो भएको छ । समाजको विगत धपक्क बलेको छ।यसै क्षेत्रमा कैयौँ भगवान वा देवताहरुले पनि जन्म लिएको तथा देशदेशावरमा यस भूमिको गरिमा बढाएका छन्।कैयौँ संस्कृतिको जन्म नै यही भएको पाइएको छ । संस्कृतिमा विविधता र इतिहासको गरिमालाई राम्ररी विचार गर्ने हो भने यसको गरिमालाई वर्तमानले अझ बढाउनुपर्ने देखिन आउँछ ।
यस प्रदेशका प्रमुख दुई सहरमध्ये वीरगंज महानगर र जनकपुर उपमहानगर पर्दछन् । वीरगंजलाई देशकै आर्थिक राजधानी मानिन्छ भने जनकपुर यस प्रदेशको राजधानी बनेको छ । वीरगंज त आधुनिक सहर हो । सय वर्षअघि यस सहरको स्वरुप कस्तो थियो भन्ने बारेमा केही दस्तावेजहरु हेर्दा यहाँ खासै ठूलो बस्ती रहेको पाइँदैन तर जनकपुरको सबाल भने धेरै भिन्न छ । जनकपुरलाई पौराणिक बस्ती मान्नेको कमी छैन । कम्तीमा एक सय दश वर्षपहिले यहाँ जानकी मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको ऐतिहासिक प्रमाण भेटिन्छ । यहाँ यत्तिकै त मन्दिर पक्कै बनाइएन । यहाँको सभ्यता र संस्कृति, इतिहास र पुराण तथा यहाँको बस्ती आदिले धेरै कुरा बोलेकै छन् । यस प्रदेशका अन्य स्थानमा पनि वेदकालीन समयभन्दा पुरानो बस्ती रहेको सम्भावनायुक्त अनुमानलाई बल दिएको छ । तर देशदेशावरमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको अध्ययनको अवस्था कस्तो रहेको छ त ? विचार गर्नुपर्ने पक्ष रहेको छ ।
यस प्रदेशका जति विद्यार्थी अन्य प्रदेशमा पढ्न गएका छन् त्यसको तुलनामा अन्य प्रदेशका विद्यार्थी यस प्रदेशमा पढ्न कति आउँछन् ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने वास्तवमा शिक्षामा यो प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । शिक्षाको केन्द्रको रुपमा वीरगंज र जनकपुर नै रहेका छन् । शिक्षाको केन्द्र भए पनि के यी दुई सहरले अध्ययनको संस्कृतिलाई विस्तार गरेका छन् त ? अध्ययन भनेको विद्यार्थीको पढाइ मात्र होइन । विद्यार्थीको पढाइ पनि अध्ययन हो र अध्ययनको एउटा अंश हो तर अध्ययनले जीवनको समग्रतालाई समेटनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् कि पढिरहेका छन् ? विद्यार्थीलाई जति धेरै रटाउन सक्यो, घोकाउन सक्यो उति धेरै राम्रो भन्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा विद्यार्थीमा घोक्नेकलाको विकास त भइरहेको छ तर अध्ययनको बानी भने परिरहेको छैन ।अध्ययनको बानी नपरेको कसरी स्पष्ट हुन्छ भने राम्रो डिभिजन ल्याएर पास गरेको र राम्रो नोकरीमा रहेका मानिस किन आफूलाई अध्ययनशील बनाइरहँदैन।
धेरै पढेका र धेरै राम्रो नोकरी गरेका, आफ्नो जमानामा सबैभन्दा बढी अध्ययनशील भनिएका र मानिएकाहरुमा पनि पछिसम्म अध्ययनको भोक किन रहँदैन ? अध्ययनको भोक नलागेको देख्ता, सर्वसाधारण पाठकमा अध्ययनको भोक नजागेको देख्ता कतै अध्ययनको महत्व कम भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न मनमा उब्जिन्छ । के अध्ययनको महत्व कम भएको हो त ?
कोही पनि अनपढलाई पनि यदि सोध्ने हो भने अध्ययनको महत्व कम भएको भन्ने कुरोलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सक्छन् । संसारमा कमै यस्ता मान्छे होलान् जसले अध्ययनलाई महत्व नदिएको होला तर हाम्रो समाजको समस्या कहाँनेर छ भने अध्ययन भनेकै विद्यालय तथा क्याम्पसको पढाइलाई बुझ्न थालेको छ । अध्ययनको सीमित अर्थलाई नै पूर्ण अर्थमा लिन थालिएको छ । अध्ययनलाई रोजीरोटीसित गाँसिनासाथ आफू संसार जानेको अनुभू ितगर्न थालेको वर्तमानले अध्ययनलाई जीवनसित कसरी जोड्ला भन्ने समस्या रहेको छ । अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नचाहनेहरुले समाजको अन्तर्यलाई बुझ्न सकेका छैनन् । समाजलाई नै नबुझ्नेले समाजलाई सही दिशा कसरी प्रदान गर्न सक्छन् ? समाजलाई सही दिशा प्रदान गर्ने मानिसको समाजमा अभाव रहेको सबैले स्वीकार्ने गरेकै छन् । पढ्दै नपढेका मानिसले पनि अध्ययनको महत्व बुझेका छन् तर मेधावी मानिसहरुको रुचि भने अध्ययनतिर छैन । आफ्नो रुचि र प्रतिभा भएको क्षेत्रका पुस्तकहरु पनि खोजेर पढ्न सकिन्छ तर यस प्रकारका किताबहरुको अध्ययन समाजका सदस्यहरुले गर्न सकेको देखिँदैन ।
एकजना अध्ययनशील व्यक्तिले हालै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए – जसको लागि लेखिन्छ उही पढ्दैन भने लेख्नुको औचित्य हुँदैन । एक हदसम्म यो कुरो ठिकै पनि हो तर अर्कोतिरबाट यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने लेख्नेको काम लेख्ने र पढ्नेको काम पढ्ने हो । पढ्नेले आफ्नो कर्म गरेन भन्दैमा लेख्ने पनि आफ्नो कर्मलाई बिर्सनु हुँदैन । जसको लागि लेखिँदैछ उसले नपढे नपढ्नेको अयोग्यता झल्किन्छ। अध्ययनको योग्य समाजको निर्माण गर्नमा लेख्नेको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ सही हो तर समाजको एक वर्गले समाजलाई अगाडि बढाउन खोज्ने हो भने समाज अपांग हुन्छ ।अध्ययनको सीमा र क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन तथा अध्ययनलाई जीवनव्यापी बनाउन सबै पक्षले अध्ययनप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ ।समाजका सबै वर्ग, समुदाय तथा पक्षले आफ्नो रुचि र प्रतिभाको क्षेत्रको अध्ययनसित उपयोगितालाई समन्वय गर्नुपर्छ र सक्नेले लेख्नु पनि पर्छ । लेखपढले जीवनको पनि उपयोगिता बढाउने कुरो पनि आफूलाई पढेलेखेको र विद्वान ठान्नेले बुझ्न नसक्नु हाम्रो समाजको यथार्थ विडम्बना हो, दुर्भाग्य पनि हो ।
हरेकलाई आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको विद्वतालाई निरन्तर वृद्धि गर्दछ । नवीनतासित अपडेट गराउँछ । आफ्नो अध्ययन र विद्वताको उच्चतालाई बढाउँछ । आफ्नै गरिमालाई बढाउँछ र आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको आफ्नो विद्वताको पहिचानलाई अन्य क्षेत्रमा पनि बढाउन सहयोग गर्दछ । आफ्नै प्रतिष्ठा बढाउँछ र आफ्नो प्रतिष्ठासित आफ्नो अध्ययन र विद्वताको प्रतिष्ठालाई पनि बढाउँछ । अध्ययनले एकजना अध्यार्थी वा अध्ययनकर्ता विद्वानको मात्र नभएर उनको परिवार तथा समाजको पनि महत्व बढाउँछ । आफ्नो समाजको प्रतिष्ठा बढाउने काम पनि अध्ययनले गर्ने हुनाले अध्ययनको महत्व कहिल्यै कम हुने कुरै आउँदैन । अध्ययनले नै अध्ययनको महत्व बढाउने हुनाले वास्तवमा विद्वानहरुले झन् बढी अध्ययन गर्दछन् ।
सबै पेसा तथा वर्ग र समुदायका शिक्षित र अध्ययनशील व्यक्तिहरुले पत्रपत्रिका र पुस्तक अध्ययनको रुचिलाई विस्तार गर्नुपरेको छ । पुस्तक र पत्रपत्रिकाको अध्ययन गराउने रुचि जगाउन आफैँ पनि पढ्ने संस्कारको विकास गर्नु उचित छ । हरेक व्यक्तिले कम्तीमा दिनको एक घन्टा अनिवार्य अध्ययनको बानी बसाल्यौँ भने हाम्रो समाजबाट अध्ययनको दरिद्रता हटेर जानेछ । यो भूगोल फेरि अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र गम्भीर विषयमा लेख्ने तथा तर्क गर्ने विद्वानहरुको क्षेत्र बन्नेछ । यसमा आफ्नो योगदान खोज्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ ।
सानै उमेरमा छोरीको विहे नगर्नुस् ः मन्त्री साह